2022 ၂၀၂၁ မေတွင်အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများ - [အမြတ်ရရှိရန်အတွက်စတင်သူများလမ်းညွှန်]
အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများ - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလမ်းညွှန်မှုကိုလေ့လာပါ။
Bitcoin ပွဲစားများသည် သင့်ကိုယ်ပိုင် Bitcoin အချို့ကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် cryptocurrency တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်ရန် ရှာဖွေနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ Bitcoin ပွဲစားမှတဆင့်ဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများသည်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုလျင်မြန်စွာဖွင့်ရန်၊ ငွေထည့်ရန်ငွေထုတ်ရန်သို့မဟုတ် credit card ဖြင့်ငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ထဲမှာရာပေါင်းများစွာသောတက်ကြွတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဘယ်ပွဲစားကိုဝင်မယ်ဆိုတာမလွယ်ကူဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၏ထိပ်ဆုံး Bitcoin ပွဲစားရွေးသူများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရုံသာမကဘဲ၊ Bitcoin CFDs ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရာတွင်အလုံခြုံဆုံး၊ ဈေးအသက်သာဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မှတ်စု: Bitcoin ပွဲစားကိုရှာဖွေသောအခါတွင်ရှာဖွေရန်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်မှာ စည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့် ပွဲစားသည် လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်ပါက ၎င်းကို ရှောင်သင့်သည်။.
တစ် ဦး က Bitcoin ပွဲစားရိုးရှင်းစွာတစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် cryptocurrencies ကိုသင်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့် platform ။ သမားရိုးကျအွန်လိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခုကဲ့သို့ပင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ရန်ပုံငွေများထည့်ရန်နှင့်သင်ဝယ်လိုသော Bitcoin မည်မျှဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားများသည်သင့်အားနေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအားငွေထုတ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ ဘဏ်အကောင့်များသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် e-ပိုက်ဆံအိတ်ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ပွဲစားများ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ CryptoRunner.
အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ Bitcoin ပွဲစားများသည် သင့်အား အခကြေးငွေကောက်ခံပါမည်။ ၎င်းသည် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစား အကွာအဝေးတွင် ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် သင့်ကုန်ကျစရိတ်များသည် သင်အသုံးပြုသော ပွဲစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Bitcoin ပွဲစားများ ခေတ်စားနေချိန် ကြိုက်သည်။ Coinbase အပ်ငွေများအတွက် အခကြေးငွေ ကောက်ခံခြင်း။ နှင့် ဝယ်ယူပါ - Crypto Rocket နှင့် eToro ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်မလုပ်ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားမလုပ်မီပွဲစား၏အခကြေးငွေကိုနားလည်ရန်လိုသည်။
ဤသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့် - Bitcoin ပွဲစားနှစ်မျိုးသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသောကြောင့်သင်ရွေးချယ်သောတစ်ခုသည်သင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ Bitcoin ကိုကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် CFD မှသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ပွဲစားရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ Bitcoin ၀ ယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့အဓိကပြောဆိုနိုင်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအောက်ပါကဏ္inများတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။
Bit 'အမှန်တကယ်' Bitcoin ကိုဝယ်ခြင်း
Bitcoin သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော ငွေကြေးဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်က ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ရွှေတောင်ကိုင်တဲ့သူတွေ Bitcoin ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ လုံခြုံအောင်ထားဖို့ 100% တာဝန်ရှိပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင်၏ Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဟက်ခ်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် သင်သည် ငွေများကို မမှန်ကန်သောလိပ်စာတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဆိုပါက၊ သင်၏ Bitcoin သည် ထာဝရဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်မတူဘဲ၊ သင်တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူ။ အရှုံးကိုစုံစမ်းရန်ပွဲစားကိုမပြောနိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည် 'အမှန်တကယ်' Bitcoin ၀ ယ်ယူခြင်း၏အန္တရာယ်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုသင်အမြဲတမ်းလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
သင် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိလျှင်ယခု, ဒီသေချာပေါက်တစ်ခု - ပြောသူတစ် ဦး ထုတ်ပေးမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်သင်သည် Bitcoin အာကာသထဲသို့ပထမဆုံးအကြိမ် ၀ င်ရောက်သောလူသစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒင်္ဂါးများကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်မှာများပြားလှသောအရင်းအနှီးများပါ ၀ င်ပါက၊
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသင်အမှန်တကယ် Bitcoin ကိုပိုင်ဆိုင်လိုပါကပွဲစားသည်နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်သင်၏အမှာစာကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဒင်္ဂါးများကို ၀ ယ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်သို့ထုတ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများကသင့်အားဒင်္ဂါးများကိုပွဲစား၏ '' ပိုက်ဆံအိတ် '' အတွင်းသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။
Bit Bitcoin CFDs ၀ ယ်ခြင်း
Bitcoin CFDs ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကို option2နဲ့ထွက်သွားစေတယ်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက် CFD (Contract-for-Difference) သည်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမယူပဲပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘဏ္instrumentာရေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား, သငျသညျရိုးရိုးပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းတက်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မယ်ရှိမရှိအပေါ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။
၎င်းတွင် Bitcoin ကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုများသာမကဘဲ ရိုးရာစျေးကွက်များတွင် ရောင်းဝယ်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများပါ၀င်သည်။ မျဉ်းကြောင်းများတစ်လျှောက် စဉ်းစားပါ။ ရှေ, ဆီ, စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်း, ဓါတျငှေ့, ဂြုံနှင့် ETFs. တစ်ဖက်တွင်၊ Bitcoin CFD ကို ၀ ယ်ခြင်းသည်အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်အမှန်တကယ်မပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
သို့သော်ယင်းသည်အမှန်အရေးပါသလော။ အမှန်ကတော့သင်ရှာနေမယ်ဆိုရင် Bitcoin ဝယ်ဖို့ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်အနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတိုးလာလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်တဲ့အတွက် CFDs တွေကဒီကိုလွယ်ကူစေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်က Bitcoin CFD ကိုဒေါ်လာ ၆၀၀၀ တန်ဖိုးဖြင့် ၀ ယ်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ နှင့်ရောင်းချလျှင်၎င်းသည် 'အမှန်တကယ်' Bitcoin 'ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းအမြတ်အစွန်းကိုသာရရှိသည်။
တကယ်တော့ CFDs ကိုအထူးပြုသည့် Bitcoin ပွဲစားများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြသည်။
အွန်လိုင်းအာကာသအတွင်းလူကြိုက်အများဆုံး Bitcoin ပွဲစားတစ်ခုမှာ Coinbase ဖြစ်သည်။ အဓိကကျသောအချက်မှာ Bitcoin သည်နေ့စဉ်ဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့် ၀ ယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော် Coinbase သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒက်ဘစ်တန် / အကြွေးကဒ်ဖြင့်ငွေသွင်းရန် ၃.၉၉% ပေးရမည်၊ ထို့နောက် Bitcoin ကိုသင်ဝယ်သည့်အခါသို့မဟုတ်နောက်ထပ် ၁.၅% ပေးရမည်။ ဒီအဖိုးအခများ ကြီးမားသော CFDs ကိုအထူးပြု Bitcoin ပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။
တကယ်တော့၊ ဒီစာမျက်နှာမှာကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော Bitcoin ပွဲစားများသည်သင့်အားအခမဲ့ငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုရုံတင်မကဘဲ၊ Bitcoin ကိုမည်သည့်ကော်မရှင်မပေးဘဲကုန်သွယ်နိုင်သည်။
၂။ CFD ပွဲစားများကိုကြီးလေးစွာအုပ်ချုပ်သည်
ပိုမိုကျယ်ပြန်၏အများကြီး cryptocurrency ပွဲစား အာကာသတစ်ခုစည်းကမ်းထုံးစံ၌လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံအနည်းငယ်သည် crypto-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဥပဒေပြဌာန်းရန်မလိုအပ်သေးသောကြောင့်ပလက်ဖောင်းများသည်လိုင်စင်မပါဘဲကုန်သွယ်နိုင်ကြသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ CFD ပွဲစားနေရာအား ကြီးကြီးမားမား ကန့်သတ်ထားသည် - ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ရန်ပုံငွေများသည် အချိန်တိုင်းလုံခြုံနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Bitcoin ပွဲစားများအားလုံးသည် အဆင့်တစ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုင်စင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ၎င်းတွင် UK ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။ FCAဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ ASICဒါမှမဟုတ် Cyprus ရဲ့ CySEC.
အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတိုချုံးဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ 'အစစ်အမှန်' Bitcoin ကိုဝယ်ယူခြင်းသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားထံမှ ဒင်္ဂါးများကို ထုတ်ယူရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့အား သီးသန့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် လုံခြုံစွာထားရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းမှ ကြွလာသောအခါ၊ သင်သည် အကြွေစေ့များကို အွန်လိုင်းပွဲစားသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပြီး ၎င်းတို့ကို ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာ အန္တရာယ်နှင့် ပြည့်နေသော အလွန်ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအရာများနှင့်အတူ CFDs ကိုအထူးပြုသည့် Bitcoin ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သိုလှောင်မှုအတွက်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် CFD များသည်ဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာမရှိသောအဓိပ္ပာယ် - အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုခြေရာခံရုံသာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင့် Bitcoin ပျောက်သို့မဟုတ်ခိုးယူခံရမည်ကိုကွောကျရှံ့ခွငျးမရှိ!
ထို့အပြင်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုငွေထုတ်ပေးသည့်အခါ၎င်းသည်လေညှင်းကိုဖြစ်စေသည်။ သင်၏ Bitcoin သည်ပွဲစားများတွင် CFD တူရိယာတစ်ခုမှသိမ်းဆည်းထားသဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန်ရောင်းရန်အမိန့်ကိုသာထားရန်လိုအပ်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုသင်ငွေထုတ်ယူနိုင်ပြီးသင်၏ debit / credit card, bank account သို့မဟုတ် e-wallet သို့ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
4. Leverage နှင့် Short-Sell လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
သမားရိုးကျ Bitcoin ပွဲစားနှင့်မတူဘဲ CFDs ပုံစံ cryptocurrencies ကိုကမ်းလှမ်းသူများသည်သင့်အားသြဇာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်သင်၏အကောင့်တွင်သင်ထက်ပိုပြီးကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ယူကေတွင် Bitcoin အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပေါင် ၁၀၀၀ ၀ ယ်ယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အခြားဒေသများတွင်သင်သည် ၁၀၀x အထိကောင်းစွာရောင်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပေါင် ၅၀၀ လက်ကျန်သည်သင့်အားပေါင် ၅၀,၀၀၀ နှင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
အလားတူစွာ၊ cryptocurrencies ကိုလက်ခံသော CFD ပွဲစားများကသင့်အား Bitcoin ကိုတိုတောင်းစွာရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Bitcoin တန်ဖိုးကျသွားပါကသင်အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည်။
ယခုသင်စျေးကွက်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည့် Bitcoin ပွဲစားနှစ်မျိုးကိုသင်သိပြီ ဖြစ်၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့ငွေပေးချေမှုကိုဆွေးနွေးသွားမည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည် Bitcoin ကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာငွေဖြင့် ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားနှင့်အပြင်မှရန်ပုံငွေများကိုသင်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
Bitcoin ပွဲစားအများစုသည်သင့်အားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းရန်နှင့်ထုတ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည် -
ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခ
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် Bitcoin ပွဲစားများသည်ရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ယူရန်အတွက်သင်အားအခကြေးငွေပေးလိမ့်မည်။ ငါတို့အစောပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း Coinbase ၏အကြိုက်များသည်ဒက်ဘစ်နှင့်အကြွေးကဒ်အပ်ငွေများအတွက် ၃.၉၉% အထိသွင်းသည်။
ဆိုလိုသည်မှာပေါင် ၁၀၀၀ အပ်ငွေသည်သင့်အားပေါင် ၃၉.၉၉ ကျသင့်မည်။ အခြားအပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် eToro ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများသည်သိုက်များပေါ်တွင်အားမသွင်းဘဲငွေသားထုတ်ယူခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာသာပေးသည်။
Bitcoin ပွဲစားများသည်ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်စင်မြင့်၏အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုသင်ကောင်းစွာသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။ ယင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည် -
ဤသည်သည်သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းပွဲစားများမှကောက်ခံသောကော်မရှင်ဖြစ်သည်။ သင်က Bitcoin ကိုသင်ဝယ်သည့်အချိန်နှင့်သင်ရောင်းသောအခါတွင်အခကြေးငွေပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်တခုခုကျသင့်လျှင်သင်ဝယ်လိုသောပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်ပွဲစားသည် ၁.၅% ကောက်ခံပြီး Bitcoin ပေါင် ၂,၀၀၀ တန်ဝယ်လိုသည်။ ၎င်းသည်ကန ဦး ကြေး£ ၃၀ သို့ဘာသာပြန်လိမ့်မည်။ သင်၏ Bitcoin ကိုရောင်းသည့်အခါကော်မရှင်တစ်ခုကိုလည်းပေးရလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏£ 2,000 Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပေါင် ၃၀၀၀ တန်သည်ဟုဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စျေးကွက်တန်ဖိုးပေါင် ၃၀၀၀ ကို ၁.၅% ပေးရမည် - ၎င်းသည်ပေါင် ၄၅ နှင့်ညီသည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော Bitcoin ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်လုံးဝမရှိပေ။
Bitcoin ပွဲစားများအားလုံးသည်အားသွင်းပါလိမ့်မည် ပျံ့နှံ့။ ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာများကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏“ ၀ ယ်ခြင်း” နှင့်“ ရောင်း” စျေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် Bitcoin သည်“ ၀ ယ်ယူသည့်” ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ နှင့် 'ရောင်းရန်' ဒေါ်လာ ၆၀၆၀ ရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁% ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအနည်းဆုံး ၁% တိုးရန်အတွက်ပင်ချိုးဖောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ပွဲစားများမှကောက်ခံသည့်ပြန့်ပွားမှုများနှင့်ကော်မရှင်များအကြားအပေးအယူလုပ်ခြင်းသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် sign up မလုပ်မီသင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သာဓကအားဖြင့်ပွဲစားသည်မည်သည့်ကော်မရှင်မဆိုငွေမတောင်းနိုင်သော်လည်း ၄ င်းပြန့်ပွားမှုသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသည်ဟုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Bitcoin ပွဲစားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်စဉ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှုပ်ထွေးနေဆဲပင်? သို့ဆိုလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကိုငွေသားထုတ်ခြင်းဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေများအပ်နှံခြင်း၊
အဆင့် 1: Bitcoin ပွဲစားကိုရှာပါ
ဘောလုံးကိုလှိမ့်ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် Bitcoin ပွဲစားကိုသင်လိုအပ်သည်။ CFDs မှတစ်ဆင့် Bitcoin တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်အသံကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဤစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးသို့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောထိပ်ဆုံးငါးခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်ကိုယ်တိုင် သုတေသနပြုလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္ဍသို့ ဆင်းပါ။ Bitcoin ပွဲစားကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
ထိန်းချုပ်ထားသောပွဲစားတစ် ဦး နှင့် Bitcoin ၀ ယ်ရန်သင်၌အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ စိတ်မပူပါနှင့်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်သာကြာပါသည်။ သင်တည်ထောင်ပြီးသည်နှင့် Bitcoin ကိုသင်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းလွတ်လပ်စွာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ္တူတစ်ခုတင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ စင်မြင့်သည်ထိုစာရွက်စာတမ်းကိုချက်ချင်းအတည်ပြုနိုင်သင့်သည်။
သင်၏အသစ်ဖန်တီးထားသော Bitcoin ပွဲစားစာရင်းသို့ငွေအချို့ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်း၌ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတွင်ငွေသွင်း / အကြွေးကဒ်၊ ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ် e-wallet တို့ပါ ၀ င်သည်။
အဆင့် ၄: Bitcoin ကိုဝယ်ပါ
သင်၏အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးပါက Bitcoin ကိုသင်ဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်အမိန့်ချမှတ်ရန်သင့်အားလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာပါ။
'ဝယ်သည်' အော်ဒါကို ရွေးပါ။
သင့်ဒေသသုံးငွေကြေးဖြင့် သင်ဝယ်ယူလိုသော Bitcoin ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
နောက်ရနိုင်သောစျေးနှုန်းကိုယူရန် စျေးကွက်မှာယူမှုကို ရွေးချယ်ပါ။
Leverage ကိုအသုံးပြုလိုပါက၊ သင်၏ Multiple ကိုရွေးချယ်ပါ။
စျေးကွက်များက သင့်အား ဆန့်ကျင်ပါက သင့်ကုန်သွယ်မှုကို အချို့သောစျေးနှုန်းဖြင့် ပိတ်လိုပါက ရပ်တန့်-အရှုံးအမိန့်ကို သတ်မှတ်ပါ။
သင်ဝယ်ယူမှုအမှာစာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အဆင့် ၅ - သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုငွေထုတ်ချေးခြင်း
အကယ်၍ သင်သည် CFD ပွဲစားဖြင့် Bitcoin ကိုဝယ်ယူပါက၊ သင်ဘာမှထပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ သင်သည်သင်၏ Bitcoin ကိုရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်မချင်း - သင်ပေးဆောင်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
သင်ပြုလုပ်ပါကသင်၏ Bitcoin ပွဲစားအကောင့်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်ပြီးရိုးရှင်းစွာရောင်းရန်မှာထားရန်လိုအပ်သည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်သည် Bitcoin ကိုကိုင်ဆောင်တော့မည်မဟုတ်ဘဲသင်၏ငွေလက်ကျန်သို့ငွေထပ်မံထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများကိုရှာဖွေခြင်း
ပလက်ဖောင်း ၂ ခုအတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်တစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး ပြောရန်အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစား ဟူ၍ မရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားတစ်ယောက်သည်အလွန်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုနှင့်ကော်မရှင်အနိမ့်ကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုမထောက်ပံ့ပေ။ အလားတူစွာပွဲစားသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုင်စင်များကိုသိမ်းထားနိုင်သည်။ သို့သော်သိုက်နှင့်ထုတ်ယူခများမြင့်မားနေပါကအကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစားများအတွက်သင်၏ရှာဖွေမှုတွင်အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုဖတ်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ဤသည်အထူးသဖြင့်အချက်ညှိနှိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးသည်မှာသင်ရွေးချယ်ထားသော Bitcoin ပွဲစားကိုစည်းကမ်းလိုက်နာစေရေးသေချာစေရမည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့ပါကရှောင်ရှားပါ။ FCA, ASIC သို့မဟုတ် CySEC စသည့် Tier-one အလွှာများကထိန်းချုပ်ထားသော Bitcoin ပွဲစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဤအရာသည်သင် Bitcoin ကို ၀ ယ်ယူရောင်းချနိုင်ခြင်းသည်လုံခြုံပြီးလုံခြုံသော ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ပွဲစားသည်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုထောက်ပံ့သည်ကိုကြည့်ပါ။ အကြွေး / အကြွေးကဒ်များနှင့် e-wallets များမှတဆင့်အခကြေးငွေကင်းလွတ်စွာပေးသွင်းရသောပွဲစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာသင်၏အကောင့်သည်ချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် Bitcoin ပွဲစားများသည်သင့်အားဘဏ်စာရင်းတစ်ခုတွင်ငွေထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်ရန်ပုံငွေရှင်းရန်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ရပါလိမ့်မည်။
သင်တစ် ဦး Bitcoin ပွဲစားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်တစ် ဦး အချို့သောအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်သွားတော့, ဒါကြောင့်သူကလက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီကအဘယ်အရာကိုပမာဏကိုရှာဖွေသေချာပါစေ။ အကောင်းဆုံးသောကမ္ဘာတွင်သင့်အား Bitcoin ကိုကုန်သွယ်မှုနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများကို အသုံးပြု၍ သင့်အားကော်မရှင်ကင်းမဲ့စွာဖြင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
✔️ CFDs သို့မဟုတ် 'အမှန်တကယ် Bitcoin'
သင်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်အမှန်တကယ် Bitcoin ၀ ယ်လိုပါကများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်သင်အကြွေစေ့များကိုကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုသို့ထုတ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင် CFDs ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သင့်မှာအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်သင်က Bitcoin ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်ပြီးတိုတောင်းသောရောင်းချခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး CFD ပွဲစားကိုအလွန်အမင်းထိန်းညှိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် cryptocurrencies လောကသို့စတင်သည်ဆိုပါကပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသော Bitcoin ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်နေရာများသောဗီဒီယိုများ၊ တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပင်ပါဝင်သည်။
အခြားအပိုင်းတစ်ပိုင်းတွင်သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါကအဆင့်မြင့်ဇယားဆွဲကိရိယာများ၊ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအခြေခံသဘောတရားများကိုကမ်းလှမ်းသော Bitcoin ပွဲစားများနှင့်ကပ်ပါ။
တိုက်ရိုက်ချတ်၊ အီးမေးလ်နှင့် တယ်လီဖုန်းပံ့ပိုးမှုကဲ့သို့သော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုချန်နယ်များကို ကမ်းလှမ်းထားသည်ကို လေ့လာရန် မမေ့ပါနှင့်။ ထို့အပြင် ပံ့ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့၏ အလုပ်ချိန်များသည် သင့်ဒေသစံတော်ချိန်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ။
2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး Bitcoin ပွဲစား - ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု
Bitcoin ကိုယခုဝယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း DIY အခြေခံဖြင့်ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်အချိန်မရှိပါ။ သို့ဆိုလျှင် အောက်တွင် 2022 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်း Bitcoin ပွဲစားကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးမှု ၅ ခုမှတစ်ခုချင်းစီကိုသင်မဖတ်မီကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသောပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အောက်ပါစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
အဆင့်တစ် လိုင်စင်အဖွဲ့မှ စီမံကွပ်ကဲသည်။
အခကြေးငွေ နည်းပါးခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင်များ။
Leverage နှင့် Short-selling ကို ကမ်းလှမ်းပါ။
AVATrade -2x $200 Forex ကြိုဆိုသော ဘောနပ်စ်များ
နိဂုံးချုပ်အနေနှင့်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးနေရာသည် Bitcoin ပွဲစားများနှင့်အတူယိုစီးနေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်က 'အမှန်တကယ်' Bitcoin သို့မဟုတ် CFDs များ ၀ ယ်နေခြင်းရှိ၊ မရှိအကဲဖြတ်ရန်အချိန်ဖြုန်းရန်လိုအပ်ရုံသာမကအခြားစည်းမျဉ်းများ၊ အခကြေးငွေများ၊
သုတေသနလုပ်ရန် အချိန်မရှိလျှင် - အစား သင်လုပ်ချင်သည်။ Bitcoin ဝယ်ဖို့ ယခုအချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ပွဲစားငါးခုကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ ဤကြိုတင်စစ်ဆေးထားသောပွဲစားများသည် သင့်အား လုံခြုံ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ချောမွေ့သောနည်းလမ်းဖြင့် Bitcoin ကိုဝယ်နိုင်စေသည် - ထို့ကြောင့် အဆုံးမှအဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ထက်မပိုသင့်ပါ။ 10 မိနစ်!
ငါအွန်လိုင်း Bitcoin ကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည့်ပွဲစားများနှင့်စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် Bitcoin သို့မဟုတ် debit သို့မဟုတ် credit card ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများမှာဘဏ်မှငွေကြေးသို့မဟုတ် e-ပိုက်ဆံအိတ်တို့ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး တွင်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူနိုင်သည့် Bitcoin ၏အနည်းဆုံးငွေပမာဏသည်အဘယ်နည်း။
၎င်းသည်သင်လက်မှတ်ထိုးသည့် Bitcoin ပွဲစားအပေါ်မူတည်သည်။ သင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ရုံသာမကအနည်းဆုံးကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုပါစစ်ဆေးသင့်သည်။ ကိစ္စရပ်အများစုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပေါင် ၅၀ ဝန်းကျင်ဖြင့်စတင်နိုင်သည်။
Bitcoin ပွဲစားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဘာကြောင့် ID ကို upload လုပ်ရမလဲ။
Tier-one လိုင်စင်ရအဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားသော Bitcoin ပွဲစားများကိုသာကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောကြောင့်သင်၏ ID မိတ္တူကို upload လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားသည်ပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်ငွေသွင်း / အကြွေးကဒ်ကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အပ်ငွေကြေးပေးရန်လိုအပ်သနည်း။
တစ်ဖန်ဤပွဲစားပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် eToro သည်သင်အား debit / credit card ဖြင့်ငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း Coinbase သည် ၃.၉၉% ကျသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရောင်းမည်နည်း။
သင်က Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်သင်ရောင်းရန်မှာထားရန်လိုအပ်သည်။ ငွေထုတ်ယူသောအခါသင်၏ငွေလက်ကျန်ကိုငွေထုတ်ယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်သိမ်းထားရန်လိုအပ်ပါသလား။
သင် CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုနေလျှင်မဟုတ်ပါ၊
ဟုတ်တယ်၊ သင်က Bitcoin ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် CFD ပွဲစားကိုသုံးပြီးတိုတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းတွင်သင်သည်လည်းသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။